ဂျနီဖာလောရင့်မြင့်၊ အလေးချိန်၊ အသက်၊ - ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး
ဂျနီဖာလောရင့်မြင့်၊ အလေးချိန်၊ အသက်၊
အဓိက / ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး
နာမည်အမှန် ဂျနီဖာ Shrader လောရင့်
အမည်ပြောင် Jen, JLaw
ကျော်ကြားသောအခန်းကဏ္။ ဆောင်းရာသီရဲ့အရိုးထဲမှာ Ree ဒေါ်လာစျေး
အလေးချိန် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ကီလိုဂရမ် ၆၃ ကီလိုဂရမ်
ပေါင်မှာ 139 ပေါင်
မွေးနေ့ သြဂုတ်လ 15, 1990
အသက် (၂၀၁၆ တွင်ကဲ့သို့) ၂၅ နှစ်
မွေးရပ်မြေ Indian Hill, Louisville, Kentucky, US
ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ / နေရောင်နိမိတ် လီယို
ဇာတိမြို့ Louisville က, ကီ
ကျောင်း Kammerer အလယ်တန်းကျောင်း, Louisville ။
အချစ် ရုပ်ရှင် - Garden Party (၂၀၀၈)
တီဗီ - ကုမ္ပဏီမြို့ (2006)
တေးဂီတဗီဒီယို - ငါလုပ်ခဲ့သော The Mess (၂၀၁၀)
မိသားစု ဖခင် - Gary Lawrene (ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားဖြစ်ပြီးကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Lawrence & Associates ကိုပိုင်ဆိုင်သည်)
အမေ - ကရင်လောရင့်စ် (ကလေးများစခန်းမန်နေဂျာ)
ညီအစ်ကိုတို့ - ဘင်နှင့်ဘလဲ (အဟောင်းများကိုနှစ် ဦး စလုံး)
ဝါသနာရှင်မေးလ်လိပ်စာ P.O. လေးထောင့်ကွက် 6509
Louisville က, KY 40206
ဝါသနာ ဂစ်တာ၊ ပန်းချီနှင့် Surfing ကစားခြင်း
အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်များ Pan's Labyrinth၊ ငါဟတ်ကာဘီတွေ၊ ပဲရစ်မှာ Midnight၊ Harold & Maude
အကြိုက်ဆုံးတီဗွီအစီအစဉ်များ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ Essex၊ Gossip Girl (2001), Bones (2005), The Simpsons (1989), Family Guy (1999)
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ Junk Food (အထူးသဖြင့် Nachos)
အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်များ ကျွန်ုပ်တို့သည် Kevin အကြောင်းပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်၊ မြင့်မားသောခေါင်မိုးရောင်ခြည်ကိုမြှင့်တင်ပါ၊ Rum Diary, အခြား Boleyn မိန်းကလေးဖြစ်သည်
အကြိုက်ဆုံးဂီတ The Paramor, The Black Keys, Mumford & Sons, Beatles
အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီး Meryl Streep, လော်ရာလင်း, Cate Blanchett
အဓိကအငြင်းပွားမှုများ သူမသည်သူမနှင့်စကားပြောနေစဉ်ဖုန်းသုံးပြီးသတင်းထောက်အားရိုင်းစိုင်းစွာဆက်ဆံသည်ဟုစွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ သူကအော်စကာဆုကိုရွှေကမ္ဘာလုံးပြပွဲဖြစ်သည့်အခါသူမကထောက်ပြခဲ့သည်။ လူတွေကပြောတာက ဦး နှောက်အာရုံကြောသတင်းထောက်ကိုဒီလိုမျိုးလုပ်တာဟာရိုင်းစိုင်းတယ်၊ တချို့ကသူမကသူမအတိုင်းအတာကိုတကယ်ပဲထိန်းထားတယ်လို့ပြောတယ်
သူမ၏ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ သူမ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုမြင်သူမည်သူမဆိုသည်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်သူမ၏ privacy ကိုကျူးကျော်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ရေးရာ / ရည်းစား ဂရေဟမ်ပက်ထရစ်မာတင် (2008-2009)
က Nicholas Hoult (၂၀၁၀-၂၀၁၄)
Net Worth အကြောင်း $ 75 သန်း
လုံးချင်းအိမ် Beverly Hills (ဒေါ်လာ ၇ သန်း)
ကားများ Volkswagen Eos, Chevrolet, Volt, Rangerover, Chrystler နှင့်အားကစားကားများ
Hindi အားလုံးကိုရုပ်ရှင်စာရင်း ntr Jr ဟုအမည်ပေးထားသည့်
Jenifer Lawrence ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား? ဟုတ်တယ်
လောရင့်သည်ကလေးငယ်တစ် ဦး အနေဖြင့် hyperactivity နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုခံစားခဲ့ရသည်။
သူမအသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင်သူမအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကင်းထောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့စဉ်ကသူမသည်စာရင်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဂျနီဖာရဲ့အခန်းကဏ္.ကို Katnis Everdeen အတွက် Hunger Games ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲများကသူမအားအသိအမှတ်ပြုမှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးသူမသည်အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေအရှိဆုံးသူရဲကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
လောရင့်စ်သည်သူမနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုများစွာရရှိခဲ့သည် David O. Russels ။ သူမသည်တစ် ဦး အနိုင်ရရှိခဲ့သည် အကောင်းဆုံးမင်းသမီးအတွက်အကယ်ဒမီဆု ရင်ခုန်စရာဟာသရုပ်ရှင်ထဲတွင်စိတ်ဓာတ်ကျမုဆိုးမ၏အခန်းကဏ္playingကိုကစားဘို့ ငွေနံရံ Playbooks 2012 ခုနှစ်တွင်, ဖြစ်လာ ဒုတိယအငယ်ဆုံး အကောင်းဆုံးမင်းသမီးအတွက်အော်စကာဆုရရှိမည်
သူမလည်းရတယ် BAFTA အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆု အနက်ရောင်ဟာသရုပ်ရှင်အတွက်ထောက်ပံ့အခန်းကဏ္သည် အမေရိကန် Hustle ။ သူမသည်တစ် ဦး စိတ်ပျက်ဇနီးကစားခဲ့သည်။
သူမသည်အနိုင်ရရှိခဲ့သည် သုံးရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲ; ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်နှစ်ခုနှင့်သူမ၏၏အခန်းကဏ္forကိုတ eponymous တီထွင်သူ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဝမ်းမြောက် ။
Lawrence သည်အအောင်မြင်ဆုံးနှင့်လစာအမြင့်ဆုံးရရှိသောမင်းသမီးဖြစ်ပြီးသူမ၏ရုပ်ရှင်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံကျော်ဝင်ငွေရရှိသည်။
ဂျနီဖာသည်အနိုင်ရခဲ့သောအသက်အငယ်ဆုံးမင်းသမီးဖြစ်သည် လေးအမည်စာရင်းတင်သွင်း ဘို့ အကယ်ဒမီဆုများ ။
သူမသည်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲနှင့်ကျား၊ သူမသည်ဟုခေါ်တွင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အခြေခံအုတ်မြစ်ရှိပါတယ် Jenifer လောရင့်ဖောင်ဒေးရှင်း။
သူမသည်သူမ၏ကလေးဘဝကိုလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် hyperactivity ကြောင့်“ မပျော်” သောအတွေ့အကြုံအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်သူမကိုမတော်တဆမှုတစ်ခုဟုခံစားမိစေသည်။
ဂျနီဖာသည်ကျောင်းမှ Cheerleader သာမကဘဲ netball၊ field hockey နှင့်ဘတ်စကက်ဘောကစားခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ဖခင်လေ့ကျင့်ရန်အသုံးပြုသောယောက်ျားတွေ '' အသင်းနှင့်အတူကစားခဲ့သည်။ သူမ၏မိခင်ကသူမသည်မိန်းကလေးများနှင့်ကစားရန်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။
ဂျနီဖာသည် Aberombie & Fitch မော်ဒယ်လ်အတွက်ရွေးချယ်ခြင်းမခံခဲ့ရသောကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းသည်မိန်းကလေးများသည်ကမ်းခြေတွင်ဘောလုံးကစားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂျနီဖာသည်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းထက်ဂိမ်းကို ပို၍ အလေးအနက်ထားသည်။ သူမကငြင်းဆန်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုမေးမြန်းသောအခါသူမသည်သူမ၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည် သာ!
သူမသည်အမြဲရည်မှန်းချက်ကြီးပြီးဆရာ ၀ န်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန်၊ အိမ်တစ်အိမ်ဝယ်ရန်၊ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန်နှင့်ကီကီတွင်နေထိုင်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့သော်လည်းသူမကျော်ကြားမည်ကိုသူအမြဲသိခဲ့သည်။
သူမရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးသရုပ်ဆောင်အခန်းကဏ္ the အပေါ်အခြေခံပြီးဘုရားကျောင်းပြဇာတ်အတွက်ပြည့်တန်ဆာဖြစ်ခဲ့သည် စာအုပ် o ယောန ပြဇာတ်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါသူ့မိသားစုရဲ့သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များက“ မင်းတို့ကလေးအတွက်ပြည့်တန်ဆာကြီးဖြစ်လို့ငါတို့မင်းကိုချီးကျူးသင့်မသင့်ဆိုတာငါတို့မသိဘူး” ဟုပြောခဲ့သည်။
ဂျနီဖာ၏မိခင်ဂျနီဖာရဲ့သရုပ်ဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အလွန်စိတ်အားထက်သန်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်သူမအခန်းကဏ္readကိုဖတ်ရှုနိုင်အောင်သူမမြို့တော်မှသူမ၏ယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအေးဂျင့်သူမအဖြစ်သူမ၏အားဖြင့်သဘောကျခဲ့သည် အအေးစာ; သူမမိခင်ကလောရင့်ကိုလိမ်ညာနေသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ သူမသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ CESD Talent Agency သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
သူမသည်အိမ်တွင်ကျောင်းတက်နေသည်မှာ ၂ နှစ်ရှိခဲ့ပြီးအထက်တန်းနှင့်နှစ်နှစ်စော။ သူမ၏သင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။
ဝါရှင်တန်ပို့စ် ဝေဖန်သူတွမ်ရှာလီကသူမသည်သူမဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည် “ မြင်ကွင်းခိုးယူသူ” သူမ၏ပုန်ကန်ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့အခန်းကဏ္သည် Lauren အတွက် ပြပွဲ ဘီလ်ထုပြပါ ။
ဂျနီဖာရဲ့အခန်းကဏ္.ကို ရီအသေးသုံးငွေရဲ့ ဒရာမာ အဆိုပါဖဲချပ်ဝေအိမ် သူမသည်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစားမှုမိခင်နှင့်အတူနေသောသမီးသုံး ဦး အနက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၏ဝေဖန်စတီဖင် Farber ဟောလိဝုဒ်သတင်းထောက် သူပြောတာက သူမသည်ကလေးငယ်များ၏ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိုပြသသည့်ကင်မရာတွင်ထိမိသည့်အသွင်အပြင်ရှိသည်။ ဂျနီဖာတစ်ခုအနိုင်ရရှိခဲ့သည် ထူးချွန်စွမ်းဆောင်ရည် ကနေဆု Los Angeles ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ။
သူမသည်သူမ၏အခန်းကဏ္ for အတွက်အကြီးအကျယ်ချီးမွမ်းခဲ့သည် ဆောင်းရာသီရဲ့အရိုး အဘို့အသူမအကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် အောင်မြင်မှုများအတွက်အမျိုးသားပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ဘုတ်အဖွဲ့ မှာ Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်။
လောရင့်စ်သည်ရုပ်ရှင်ကားများ၏အခန်းကဏ္studiesကိုကောင်းစွာလေ့လာခဲ့သည်။ သူမသည်ရုပ်ရှင်ကိုလေ့လာရုံသာမကသူမအားအကောင်းဆုံးပေးဆပ်ရန်နှင့်ဇာတ်ကောင်အားတရားမျှတမှုရှိစေရန်နေရာများ၊ သူမ၏ရုပ်ရှင်လိုပဲ ဆောင်းရာသီအရိုး, သူမဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခဲ့တယ် အရေပြားရှဥ့်, သစ်သားခုတ်နှင့်ရန်ပွဲ။
သူမအတွက် Silver Lining Playbooks, Travers ကလောရင့်ကိုမှတ်ချက်ချသည် 'အံ့ဖွယ်အမှုအချို့ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ရိုင်းစိုင်းသော၊ ညစ်ပတ်၊ ရယ်စရာကောင်းသော၊ ပုပ်စပ်သော၊ ပါးနပ်သော၊ ။ သူမသည်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုနှင့်အကယ်ဒမီဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။
သူမသည်ဖောင်ဒေးရှင်းအမြောက်အများကိုထောက်ခံရန်နှင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရင်းကိုထောက်ခံသည်။ သူသည်ကင်မရာ Davis အားတန်းတူညီမျှလက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်ကိုဆန့်ကျင်သောကြောင့်ဆန့်ကျင်ရန်မတွန့်ဆုတ်ခဲ့။
လောရင့်စ်သည်ပြဇာတ်ရုံတစ်ခုသို့မဟုတ်သရုပ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ခုမှမည်သည့်သင်တန်းကိုမျှမယူခဲ့ပါ။ သူမကိုယ်တိုင်သင်ကြားခြင်းခံရသည်ဟုယုံကြည်သည် 'ငါကလူတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ခံစားချက်တွေကိုသဘောကျတယ်။ ပြီးတော့ငါထင်တာကမင်းဟာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်လူတန်းစားကိုကြည့်နိုင်တယ်၊ လူတွေကိုကြည့်တယ်၊ နားထောင်တယ်၊ လေ့လာတယ်။
People မဂ္ဂဇင်းကသူမကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်“ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှဆုံးသူများ” အတွက်စာရင်းပေးခဲ့သည်။
ဂျနီဖာကို Time မဂ္ဂဇင်း၏ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးလူ ၁၀၀ (၂၀၁၃) ထဲမှတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။
သူမသည်သူမအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်သူမ၏ဆင်မြန်းမှုအားလုံးကိုစွန်းထင်းခဲ့သည် nachos ၏စုံအပေါ် အမေရိကန် Hustle ။ အဖွဲ့သည်အပိုစုံတွဲတစ်စုံကိုစတင်စီစဉ်ခဲ့သည်။
သူမသည်အတန်းထဲတွင်“ အပြောအရှိဆုံးသောသူ” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။
apj abdul kalam ၏လက်မှတ်
kajal aggarwal အမြင့်အလေးချိန်အသက်
kedar jadhav အမြင့်
mahendra singh dhoni ၏ပုံရိပ်